Nubia waxay ku soo bandhigi doontaa qalab isku laaban MWC 2019 | Androidsis
2019 waa sanadka aaladaha isku laaban ee ku shaqeeya Android. Laga soo bilaabo bilawgii sanadka way cadahay inay ka mid noqonayso isbeddellada sanadka. Wax yar, waxaan aragnaa sida liiska magacyadu u dhici doonaan tuurista taleefanka laabmaya ayaa kordhaya. Liis ay Nubia hadda ku biirayaan. Xaqiiqdii, sida oo kale noocyada kale sida Huawei, Qalabka calaamadda calaamadaha ayaa la filayaa in si rasmi ah loogu soo bandhigo MWC 2019.
Inkasta oo Nubia ay la timid waxyaabo la yaab leh kiiskan iyada oo leh qalabkeeda isku laaban. Astaantu waxay magac u sameysay bilihii la soo dhaafay iyada oo ay ugu wacan tahay taxane ah moodooyin aad u xiiso badan. Horey u fiirinta MWC 2019, waxay balan qaadayaan inay nooga tagi doonaan waxyaabo lala yaabo oo xiise weyn u leh qalabkan.
Qalabkan cusub ee ay noo soo bandhigtay waa Nubia Alpha. In kasta oo aysan ahayn taleefan gacmeed isku laaban sida kuwa ay noocyada kale ee Android ay si rasmi ah ugu soo bandhigayaan toddobaadyadan. Sababtoo ah soo saaraha Shiinaha ayaa naga tagaya casriga ah qaab jijin. Naqshad cusub oo shaki ku abuuri doonta faallooyin badan dhacdada taleefanka ee Barcelona dhammaadka bishan.
Sharad ka caawineysa inay aadaan ka sooc noocyada kala duwan ee Android maanta. Sababtoo ah waxay ku sii socdaan hal talaabo qalabkan. Naqshad u dhexeysa taleefannada casriga ah iyo jijin kalabar, qaabkeeda darteed. In kastoo hadda aan haysanno oo keliya fikradaha qalabkan. Maxaan ka filan karnaa Alfa kan ka yimid Nubia?
Nubia Alpha ee MWC 2019
In muddo ahba waxaa jiray hadal ah in summaddu ay ku shaqeyso shey leh astaamahan. Laakiin waqtigaas waxay ahaayeen warar xan ah, oo aan la xaqiijin. In kasta oo ugu dambayntii, hadda waxay noqotay Nubia lafteeda oo xaqiijineysa inay aadayo ku soo bandhig qalabkan cusub Shirka Caalamiga ah ee Mobilka ee ka socda magaalada Barcelona dhamaadka bishan. Shirkaddu waxay sheegtay inay soo bandhigayaan qalab leh shaashad jilicsan. Wax intaa ka badan kamay odhan.
Sababtaas awgeed, suurtagal ma ahayn in la xaqiijiyo xilligan in Alfa uu noqon doono, taas oo horeyba sawirradeedii noo ballan qaadday inaan noqonno qaab aad u xiiso badan oo lagu soo bandhigi doono dhacdada ka socota Barcelona. Uguyaraan taas waan ognahay waxaan filan karnaa qaab isku laaban by soo saaraha Shiinaha.
Intaa waxaa dheer, sida laga soo xigtay warbaahinta qaar, Nubia ma aha qofka kaliya ee ka shaqeeya noocan tikniyoolajiyadda ah. Maaddaama noocyo kale ay jecel yihiin Samsung ama Xiaomi ayaa hadda horumarin lahaa alaabooyinka la midka ah. Laakiin haddii wax walboo hagaagaan, magaca Shiinaha ayaa noqon doona kii ugu horreeyay ee si rasmi ah u soo bandhiga qalabkiisa, MWC 2019 ee Barcelona. Marka waa qayb sii kordheysa oo ay ku jiraan dhowr nooc oo xiiseynaya Android.
Waqtigaan hadda wax intaa ka badan lagama sheegin qalabka Nubia ay damacsan tahay inay ku soo bandhigto MWC 2019. Si ka duwan noocyada kale, shirkaddu ma lahan dhacdo MWC kahor. Taabadalkeed, aaladdan waxaa si rasmi ah loo arki karaa saddexda maalmood ee dhacdada ka socota Barcelona. Sidaa darteed, macaamiisha u timaada waxay awoodi doonaan inay arkaan oo ay ku tijaabiyaan dhibaato la'aan dhacdada.
Waxaan rajeyneynaa inaan helno xog cusub saacadaha soo socda oo ku saabsan qorshayaashan Nubian iyo aaladdan ay naga tagayaan. Waxaan ognahay todobaadyo in sanadka 2019 uu yahay sanadka isku laabida taleefannada casriga ah. Hadda Bishan Febraayo waxaan filan karnaa hal nooc oo kale. Sidaad ogtahay, toddobaad gudahood Samsung ayaa noqon doonta kii ugu horeeyay ee soo bandhiga taada. Muddo yar ka dib, maalin ka hor MWC, Huawei ayaa na sugaysa oo hadda, isla dhacdadaas, waxaan ku xaqiijin karnaa in Nubia ay iyagana soo bandhigi doonto sidoo kale. Waxaa macquul ah inay jiri doonaan noocyo kale oo ka badan dhacdada ka dhaceysa magaalada Barcelona, ​​in kasta oo aan wax intaas ka badan la xaqiijin, haatan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nubia sidoo kale waxay ku soo bandhigi doontaa qalab isku laaban MWC 2019